Sidee loo helaa dhimis arday Spotify
Dhimis Ardaygu waa wax in ardayda idil ay ka dib iyo marka ay timaado Spotify waxaa kale oo ay xaqiijinayaan in sifooyinka ugu wanaagsan waxaa ku riyaaqay iyo sicir-dhimista waxaa sidoo kale aan wax tarin arrinta iyo dhibaato. Qaybta dambe ee tutorial this hubiyo in user helo macluumaadka ku saabsan dhimis ardayga ka dhigi doonaa iyo sidoo kale fulin karo geedi socodka in lagu gundhig in la hubiyo in sifooyinka ugu wanaagsan waxaa ku riyaaqay iyo adeegga geeyo waxaa sidoo kale nool ee 12 bilood muddo sida ayaa ballan qaaday shirkadda in uu eegin.
Qaybta 1.Advantages dhimista Ardayga
Qaybta 2.Process ee saxiixin xirmo arday
1. Faa'iidada dhimista Ardayga
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in ay hubiyaan in aysan kaliya iibinta premium korodhka Spotify laakiin waxa ay sidoo kale hubiyaan in ka dib markii muddo 12 bilood ah, haddii ardayga uusan sii arday isreebreebka a ka dibna macaamiisha ka iman kara ka dhigi doonaa waxaa helay kuwaas oo diyaar u ah inuu hubiyo in qiimaha buuxa waxaa la bixiyaa. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka ee barnaamijka fanka oo ay hubiyaan in ardayga uu helo heshiis fiican oo u ogolaanaya in ay isticmaalaan Spotify aan xad lahayn oo aan wax qarashka dheeraadka ah sida ceelka.
Waxaa sidoo kale in la xusay in habka calaamad kor u yahay mid aad u fudud iyo ardayga waa in ay waxba ma samayn si uu u hubiyo in xirmada la saxiixay for. Waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan in aan la soo bandhigay shirkad kale oo arrintan la xiriira oo sidaas daraaddeed Spotify waxay hubineysaa in ay ku hadhaan horyaal u ah in arrintan la xiriira oo u helo adeegyada ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in ay gundhig gudahood xisaabta Spotify sidoo kale dhiman ardayda shaqada soo gashay oo u ogolaanaya inay ka saxiixdo baakada.
2. Hab-of saxiixin xirmo arday
Dhammaan qalabka loo baahan yahay in la isu saxiixay u xirmo ardayga waxaa laga heli karaa internetka oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in baaritaan xaq u yeelashada waa wax ayaa ku lug lahaa habkan sidoo. Waa ardayga in uu u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka socda habka farshaxanka aan la raacay oo keliya laakiin xaq u yeelashada la hubiyaa iyo ardayda iyo weliba hesho natiijo ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Ardaygu wuxuu sidoo kale u baahan yahay in la hubiyo in sifooyinka wanaagsan ee barnaamijyada ay bixiso by Spotify yihiin riyaaqay 50% sicir-dhimis sida xirmo ardayga ka dhigan tahay 50% sicir-dhimis ku premium Spotify.
Geedi socodka ku lug leh arrintan la xiriira weliba hubinayaa in ardayga marnaba gasho kaaftoomi ee booqashada warbaahinta si shakhsi ah iyo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale waa mid aad u muhiim ah in la ogaado in fursadaha kor u saxiixay ayaa sidaas daraaddeed waa la kordhiyey iyo weliba. Si loo hubiyo in nidaamka la raaco habka ugu fiican user ay u baahan tahay in la hubiyo in hannaanka uu soo hoos ku xusan aan la raacin oo keli ah, laakiin sidoo kale waa
1. SheerID waa shirkad ah oo uu soo kiraystay toona midkoodna waa in la hubiyo in dhimis ardayga waxaa la siiyaa oo warbixinta oo dhammeystiran waxaa lagu sameeyey arrintan la xiriira. Si aad u bilowdo nidaamka ardayga u baahan yahay si loo hubiyo in URL https://spotify.sheerid.com/ waxaa soo booqday iyo dhamaan wixii macluumaad ah ee loo baahan yahay waxaa ay kor u dhergeen;
2. Ardayga hadda u baahan yahay si loo hubiyo in tallaabada xigta ee waraaqaha loo baahan yahay in arday ama dalbaday in ay shirkadda yihiin uploaded si loo hubiyo in talaabooyinka horukaca ee geeddi-socodka. Dikumiintiga ayaa wuxuu sidoo kale waa inuu ka mid ah warbixinta oo uu soo dalbaday in la hubiyo in dhimis ardayga waxaa la tarin oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Haddii kale, haddii ardayga uu qabo arimaha uploading waraaqaha ay sidoo kale la xiriiri kartaa kooxda ID ubadatay in la hubiyo in dhibaatada la xalin iyo arday ka soconayo arrintan la xiriira. Waxaa link ayaa sidoo kale lagu xusay hoose ee bogga:
3. Marka dokumentiga ayaa uploaded dib u eegis ku bilaaban doono iyo ardaygu heli doono email ah in cinwaanka uu soo sheegnay:
Haddii dib u eegista ay ku guulaysatay ardayga la siin doonaa ID ah in uu si paste halka saxiixin dhimis ardayga iyo haddii xaqiijinta ku guuldareysto markaas ardayga waxaa sidoo kale loo sheegi doonaa oo dhan qabsoomi waayeen, sidaas darteed waxa uu leeyahay si ay u saxdo si aad u hesho ansixiyey. Ardayga ayaa heli doona conformation iyo yeelan doonaan in ay aad shabakadda internetka si aad u hubiso in dalab la tarin:
> Resource > Spotify > Sida lagu Helo Spotify Student dhimista